चरण-दर-अर्डिनोसँग घर स्वचालन कसरी सिर्जना गर्ने नि: शुल्क हार्डवेयर
जोआक्विन गार्सिया कोबो | | Arduino, रोबोटिक्स
una घर स्वचालन एउटा घर हो जुन दुई प्रणालीहरू समावेश गर्दछ, एक आन्तरिक प्रणाली र बाह्य प्रणाली, जुन ती मापन, नियन्त्रण र घरको सम्बन्धमा हुने सबै कुरा स्वचालित गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो प्राप्त गर्नका लागि स्मार्ट उपकरणहरू प्रणालीमा जडित छन् जसले हामीलाई चाहिएको जानकारी स collect्कलन गर्दछ र हाम्रा अनुरोधहरूलाई पनि जवाफ दिन्छ।
भर्खरका महिनाहरूमा घर स्वचालनको सफलता तथ्यको कारण हो यी उपकरणहरूको मूल्य जुन अत्यन्तै खस्कियो र नि: शुल्क हार्डवेयरलाई धन्यवाद, कुनै पनि उपकरण घर वा परिस्थिति को कुनै पनि प्रकार अनुकूल गर्न सकिन्छ। तत्वहरू जुन हामी आफैंले निर्माण गर्न सक्दछौं।
1 मेरो घर अटोमेसन सिर्जना गर्न मलाई के तत्वहरू चाहिन्छ?
2 स्मार्ट लाइटिंग सिर्जना गर्न मैले के गर्नुपर्छ?
3 मेरो घर अटोमेसन सुरक्षित गर्न के गर्नुपर्छ?
4 मेरो घरको वातानुकूलित गर्न मैले के गर्नुपर्छ?
5 मेरो घर सज्जन गर्न के गर्नुपर्छ?
6 कसरी मेरो घर स्वचालनको लागि एक बटलर छ?
7 के यो सुधार गर्न सकिन्छ?
मेरो घर अटोमेसन सिर्जना गर्न मलाई के तत्वहरू चाहिन्छ?
मिनी प्रोजेक्टहरू वा ग्याजेटहरूको बारेमा कुरा गर्नु अघि जसले हामीलाई घरको स्वचालन सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ, हामी साझा तत्वहरूको एक सूची बनाउँदछौं जुन हामीले यो गृह स्वचालन बनाउन आवश्यक पर्दछ।
सबै भन्दा पहिले छ एक राउटर र एक शक्तिशाली इन्टरनेट जडान जुन घर भर काम गर्दछ, त्यहाँ डेड जोन वा कोठा हुन सक्दैन जहाँ राउटर कार्य पुग्न सक्दैन। धेरै जसो केसहरूमा हामीलाई इन्टरनेट जडानको आवश्यक पर्दैन, तर हामी राउटर प्रयोग गर्दछौं। अन्य केसहरूमा, जस्तै गृह सुरक्षा, हामीलाई इन्टरनेट पहुँच चाहिन्छ, त्यसैले दुबै राउटर र इन्टरनेट पहुँच महत्त्वपूर्ण छ।
अर्को सामान्य तत्व हो रास्पबेरी पाई बोर्ड। केहि परियोजनाहरूको लागि आवश्यक हुनुको साथै, रास्पबेरी पाई बोर्डले एक सर्भरको रूपमा कार्य गर्न सक्दछ जुन बिभिन्न बुद्धिमान तत्वहरूका सबै अनुरोधहरू र अर्डरहरू प्रबन्ध गर्दछ। रास्पबेरी पाई प्रयोग गर्ने प्लस पोइन्ट हो यसको सानो आकार, यसको शक्ति र यसको कम मूल्य.
अर्डिनो युन र Arduino UNO तिनीहरू पनि आवश्यक हुन्छन् घर अटोमेसन सिर्जना गर्नका लागि। या त वातानुकूलनको अपरेशन नियन्त्रण गर्न वा डिजिटल लक नियन्त्रण गर्न, यी प्लेटहरू आवश्यक छन्, सस्तो र धेरै लोकप्रिय छन्।
को सेन्सर तिनीहरू पनि आवश्यक हुनेछ, तर यस अवस्थामा हामी धेरै धैर्य हुनुपर्दछ र सेन्सर कसरी छनौट गर्ने भनेर जान्नु नै हाम्रो स्मार्ट घरमा हुने छ, सबै दिन चल्दै, एक बर्षa365 दिन, जसको मतलब कुनै पनि प्रकार वा सेन्सरको ब्रान्डले काम गर्दैन।
घर स्वचालनको भविष्य यो छ कि यसले आवाज आदेशहरू मार्फत कार्य गर्दछ, तर वर्तमानमा जुन सबै क्षेत्रहरूमा काम गर्दैन र धेरै तत्वहरूको लागि हामीले गर्न आवश्यक पर्दछ। इन्टरनेट पहुँच संग एक स्मार्टफोन। सामान्यतया, म एन्ड्रोइड स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छु किनकि धेरै उत्पादकहरूले यस अपरेटि system प्रणालीसँग एप्पलको आईओएस भन्दा बढी काम गर्दछन्।
रास्पबेरी पाई परियोजनाहरू
स्मार्ट लाइटिंग सिर्जना गर्न मैले के गर्नुपर्छ?
एक डोमोटिक घरको प्रकाशको लागि हालैका वर्षहरूमा सबैभन्दा धेरै प्राप्त गरेको हुन सक्छ। वास्तवमा हामीसँग छ स्मार्ट बल्बहरूका विभिन्न मोडेलहरू जुन कुनै पनि बत्तीमा स्थापना गर्न सकिन्छ र राम्रो जडानको साथ, हामी प्रकाश परिवर्तन गर्न सक्दछौं र दिन वा हाम्रो स्वादको आधारमा फरक फरक वातावरणहरू सिर्जना गर्न सक्दछौं। हाल यी स्मार्ट बल्बहरू ठूलो मूल्यमा आउँदछन्, यसको मतलब सबैजना यस प्रकारका सबै बल्बहरू लिन सक्दैनन्।
यसको वैकल्पिक प्रयोग हो RGB एलईडी बत्तीहरू र तिनीहरूलाई एक अर्डिनो युन बोर्डमा जोड्नुहोस्, यसको साथ हामी हाम्रो घरमा कोठाको प्रकाश नियन्त्रण गर्न सक्छौं। आरजीबीको नेतृत्वमा बत्तीहरू स्मार्ट बल्ब भन्दा धेरै सस्तो हुन्छन् र आकार दिनसक्दछन् परम्परागत बल्बको तुलनामा रमाईलो, तर यो सत्य हो कि स्मार्ट बल्बको द्रुत र सजिलो स्थापना छ।
मेरो घर अटोमेसन सुरक्षित गर्न के गर्नुपर्छ?
घरको सुरक्षा केही नाजुक र धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हालमा, एक घर स्वचालन सिर्जना गर्न त्यहाँ स्मार्ट लकका विभिन्न प्रोजेक्टहरू छन् जुनसँग खोल्दछन् औंठाछाप वा एक स्मार्टफोन संग।
दोस्रो चरण थप गर्नु हो एक घर अलार्म सिर्जना गर्न सबै कोठामा मोशन सेन्सरहरू, तर यी परियोजनाहरू अझै राम्ररी काम गरिरहेका छैनन्। जे भए पनि, सुरक्षा अझै पनी घर अटोमेसनको लागि पेन्डि although छ तर म धेरैलाई चिन्छु जसको अज्ञानी घरहरूमा उस्तै समस्याहरू छन्।
मेरो घरको वातानुकूलित गर्न मैले के गर्नुपर्छ?
एक डोमोटिक घर को वातानुकूलन काफी गाह्रो छ, तर पनि सामान्य घर मा। पहिले हामीले यो सुनिश्चित गर्नु पर्छ कि घर राम्रोसँग इन्सुलेट छ। यो महत्त्वपूर्ण छ किनकि धेरै क्षणहरू जहाँ हामी स्मार्ट एयर कंडीशनिंग प्रयोग गर्ने छौं हामी घरमा छैनौं र यदि यो राम्रोसँग इन्सुलेट गरिएको छैन भने हामी ताप वा वातानुकूलनलाई बेकारमा र इच्छित परिणाम बिना बर्बाद गर्दछौं।
एकचोटि हामीले घर अटोमेसन घरलाई पृथक गरेपछि, हामीले सेन्सर स्थापना गर्नुपर्नेछ एक अर्डिनो ब्लुटुथ बोर्ड हरेक कोठामा। तापक्रम जानकारी केन्द्रिय कम्प्युटर वा रास्पबेरी पाईमा पठाइनेछ। रास्पबेरी पाईमा हामी एल्गोरिदमहरू प्रयोग गर्नेछौं भनेर जब कोठा एक निश्चित तापमानमा पुग्दछ वातानुकूलित वा तताउने सक्रिय हुन्छ.
घर अटोमेसनको यस पक्षमा यो हासिल गर्न गाह्रो छ किनकि एयर कन्डिशनर र तताउने बुद्धिकमान छैन र यसको एक मात्र विकल्प स्वामित्व समाधानको छनौट गर्नु हो जुन महँगो छ र अन्य टेक्नोलोजीसँग धेरै अनुकूल छैन। जे भए पनि घर अटोमेसनको यस पक्षमा अलि अलि प्रगति भइरहेको छ।
मेरो घर सज्जन गर्न के गर्नुपर्छ?
यस अघि हामीले प्रकाशलाई कसरी अनुकूलित गर्ने वा कसरी स्मार्ट लाइटिंग गर्ने भन्ने बारेमा कुरा गरेका छौं। हामी पनि एक संगीत थ्रेड सिर्जना गर्न सक्दछौं जुन प्रकाशमा जडान हुन्छ, यस प्रकार बत्ती र संगीत जोड्ने वातावरण सिर्जना गर्दछ। यस अवस्थामा सब भन्दा द्रुत समाधान एक स्मार्ट वक्ता छ.
यस पक्षमा त्यहाँ धेरै मोडेलहरू छन् जुन हामी किन्न सक्छौं अमेजन इको, गुगल होम वा सोनोस। तर हामी हाम्रो स्मार्ट स्पिकर पनि बनाउन सक्छौं। त्यहाँ धेरै प्रोजेक्टहरू छन् स्मार्ट स्पीकर सिर्जना गर्न। यस पक्षमा, लाउडस्पीकर बाहिर देखिन्छ। गुगलले रास्पबेरी पाइ शून्यको साथ प्रस्ताव गर्‍यो। केही स्मार्ट स्पिकरहरू भन्दा शक्तिशाली, निःशुल्क र सस्तो समाधान। यदि हामी नि: शुल्क समाधानको लागि छनौट गर्छौं भने, दिमागमा राख्नुहोस् कि हामीलाई संगीत भण्डारण गर्न ठूलो भण्डारणको आवश्यकता पर्नेछ.
कसरी मेरो घर स्वचालनको लागि एक बटलर छ?
अचम्मको कुरा, एक घर अटोमेसनमा प्राप्त गरीएको राम्रो पक्षहरू मध्ये एक भर्चुअल सहायकहरूको सिर्जना हो। तिनीहरूको सफलता यस्तो छ कि तिनीहरूलाई स्मार्टफोन, ट्याब्लेट र अन्य उपकरणहरूमा ल्याइएको छ।
बटलर वा भर्चुअल सहायक पाउन हामीसँग एक सेन्ट्रल सर्भरमा वा रास्पबेरी बोर्डमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्थापना भएको हुनुपर्दछ जुन सबै स्मार्ट उपकरणहरूसँग जडित छ। त्यहाँ धेरै निःशुल्क विकल्पहरू छन् जासपर o माइक्रफ्ट वा हामी पनि मालिकाना समाधानहरू रोज्न सक्छौं जस्तै अमेजन इकोबाट एलेक्सा वा गुगल होमबाट गुगल सहायक। छनौट तपाईंको हो।
के यो सुधार गर्न सकिन्छ?
अवश्य पनि यो सुधार गर्न सकिन्छ। हामीले उल्लेख गरेका धेरै पक्षहरूमा उनीहरूसँग सुधारको लागि प्रशस्त ठाउँहरू छन् तर अन्यमा जुन हामीले स indicated्केत गरेका छैनौं, कसरी प्रकाश मा, सुधार र अनुकूलन को लागी कोठा छ।
सबै कुरा आफैमा, हाम्रो घरमा र नि: शुल्क हार्डवेयरको साथ हाम्रो ज्ञानमा भर पर्छ। धेरै जसो मामिलाहरूमा हामी व्यक्तिगत र स्मार्ट उपकरणहरू सिर्जना गर्न सक्दछौं जसले समस्या समाधान गर्दछ वा होम अटोमेसन स्मार्ट बनाउँदछ, यो नि: शुल्क हार्डवेयरको उत्तम हो। तिमीलाई लाग्दैन?
लेखको पूर्ण मार्ग: नि: शुल्क हार्डवेयर » Arduino » कसरी घर स्वचालित चरण चरण बाट सिर्जना गर्ने
राम्रो काम यसले मलाई धेरै मद्दत गर्‍यो
Darko लाई जवाफ दिनुहोस्